Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 6:1-20
Hama dzechiKristu dziri kuendesana kumatare (1-8)
Vaya vasingazogari nhaka yeUmambo (9-11)
Kudza Mwari nemuviri wako (12-20)
“Tizai upombwe!” (18)
6 Zvingadaro sei kuti kana mumwe wenyu akanetsana nemumwe wake+ ari kushinga kumuendesa kumatare evanhu vasina kururama, asingamuendesi pamberi pevatsvene? 2 Kana kuti hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga nyika?+ Uye kana nyika ichizotongwa nemi, hamuna kukodzera kutonga tunyaya tudiki here? 3 Hamuzivi here kuti tichatonga ngirozi?+ Saka munoregererei kutonga nyaya dzeupenyu huno? 4 Saka kana muine nyaya dzeupenyu huno dzinofanira kutongwa,+ vanhu vanozvidzwa neungano ndivo vamungagadza kuva vatongi here? 5 Ndiri kuzvitaura kuti munyare. Pakati penyu hapana munhu akachenjera anogona kutonganisa hama dzake here? 6 Asi hama inoendesa imwe hama kudare, pamberi pevasingatendi chaipo! 7 Kana mava kumhan’arirana zvinoreva kuti matokundikana. Madii zvenyu kungobvuma kuitirwa zvakaipa?+ Madii zvenyu kungobvuma kubiridzirwa? 8 Panzvimbo pekudaro, muri kuita zvakaipa, muchibiridzira, apa muchizviitira hama dzenyu! 9 Kana kuti hamuzivi here kuti vanhu vasina kururama havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari?+ Musatsauswa.* Mhombwe,*+ vanhu vanonamata zvidhori,+ vanhu vasina kuvimbika muwanano,*+ varume vanobvuma kuitwa vakadzi nevamwe varume,+ varume vanoita vamwe varume vakadzi,*+ 10 mbavha, vanhu vane makaro,+ zvidhakwa,+ vanotuka, uye makororo, havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari.+ 11 Vamwe venyu ndizvo zvamakanga makaita. Asi makagezwa mukachena;+ makatsveneswa;+ makanzi makarurama+ muzita raShe wedu Jesu Kristu uye nemweya waMwari wedu. 12 Zvinhu zvese zvinobvumirwa kwandiri, asi hazvisi zvinhu zvese zvinobatsira.+ Zvinhu zvese zvinobvumirwa kwandiri, asi handibvumi kuitwa muranda nechimwe chinhu. 13 Zvekudya ndezvedumbu, uye dumbu nderezvekudya, asi Mwari achaparadza zvese zviri zviviri.+ Muviri hausi weupombwe,* asi ndewaShe,+ uye Ishe ndewemuviri. 14 Asi Mwari akamutsa Ishe+ uye achatimutsawo murufu+ nesimba rake.+ 15 Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu?+ Saka ndingatora nhengo dzaKristu ndodzibatanidza nepfambi here? Hazviiti! 16 Hamuzivi here kuti munhu anobatanidzwa nepfambi anova muviri mumwe chete nayo? Nekuti iye anoti, “vaviri vacho vachava nyama imwe.”+ 17 Asi wese anobatanidzwa naShe ari pamwe naye mumweya.+ 18 Tizai upombwe!*+ Chimwe chivi chese chingaitwa nemunhu chiri kunze kwemuviri wake, asi wese anoita upombwe ari kutadzira muviri wake.+ 19 Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi+ yemweya mutsvene uri mamuri, wakabva kuna Mwari?+ Uyewo, hamusi venyu pachenyu,+ 20 nekuti makatengwa nemutengo.+ Saka kudzai Mwari+ nemiviri yenyu.+
^ Kana kuti “Musanyengerwa.”
^ Kureva, munhu anorara nemurume kana mudzimai asiri wake.
^ Kana kuti “ngochani.” ChiGir., “varume vanorara nevarume.”